Banaanbaxyo lagu diidanyahay mowshinka ka dhanka ah madaxwaynaha oo kasocda Muqdisho – Radio Daljir
Banaanbaxyo lagu diidanyahay mowshinka ka dhanka ah madaxwaynaha oo kasocda Muqdisho
Diseenbar 10, 2018 8:06 b 0
Banaanabaxayaal u badan dhalinyaro gabdho iyo wiilal ah ayaa isugu soo baxay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ku qaylinaya dooni mayno qaran dumis, dooni mayno doolar qaate iyo erayo kalle oo ay ku diidanyihiin mowshinka shalay loo gudbiyay guddoomiyaha baarlamaanka ee ka dhanka ah madaxwaynaha dowladda faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay degmooyinka kalle duwan ee gobolka Banaadir, iyadoona uu iminka kusii fidayo magaalada qaybaheeda kalle.
Dhanka kalle Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah guddoomiyaha xisbiga Wadajir ee siyaasadda dowladda dhaliilsan ayaa ku wajahan magaalada Muqdisho, waxaana garroonka diyaaradaha Aadan Cadde ku sugan xildhibaano katirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa shalay loo gudbiyay mowshink ka dhan madaxwaynaha, waxaana mowshinka oo uu aqbalay guddoomiyaha baarlamaanka diiday kuxigeenada guddoomiyaha baarlamaanka, iyadoona baarlamaanka qayb ka mid ahna ay soo gudbiyeen mowshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal.
Xaaladda siyaasadeed ee magaalada Muqdisho ayaan la’ ogayn halka ay saldhigan karto, iyadoona dowlad goboleedyada ay hadda ka socoto doorashooyinkii gudaha.
Puntland iyo aragtida mowshinka ka dhanka ah madaxwayne Farmaajo (dhegayso)